Sargaal ka tirsan Badbaado Qaran oo ka badbaaday isku day dil | KEYDMEDIA ONLINE
Sargaal ka tirsan Badbaado Qaran oo ka badbaaday isku day dil
Qarax Ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lala beegsaday xero ciidan oo ku taalla degaanka Biya-cade, oo qiyaastii 42KM u jira magaalada Jowhar.
JOWHAR, Soomaaliya - Ugaarsi ka dhan ah Saraakiishii iyo Ciidankii Badbaado qaran, ee Farmaajo ka hor istaagay inuu kursiga madaxweynaha xoog ku sii joogo, ayaa lagu billaabay ugaarsi xooggan, waxaana Qarax lala beegsaday Korneel Saneey Cabdulle, oo ka mid ah hal-bowlayaashii dalka ka badbaadiyay gacan kali-talis.
Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ayaa dhawaan lagu dhuftay albaabka xero ay ciidanka Milateriga Soomaaliya ku leeyihiin degaanka Biya-cade ee gobalka Shabeelada Dhexe, halkaas oo uu ku sugnaa Korneel Saneey Cabdulle oo ay wehliyaan Saraakiil kale.
Ku dhawaad Shan askari ayaa la xaqiijiay in ay ku geeriyoodeen qaraxa, waxaana jira dhaawac intaas ka badan oo uu ka mid yahay Korneel Saneey.
Billowgii bishi May ayay ahayd markii mid ka mid ah askartii ciidamada dowladda ee ku biiray ciidanka bad-baado qaran ee kasoo horjeeday muddo kororsiga meydkiisa laga helay agagaarka Iskuul Buluusiya ee Muqdisho.
Isla dhamaadkii bishaas, ciidamo la rumeysan yahay in ay ka amar qaataan Taliyaha Ciidanka Lugta ee Xoogga Dalka, Gen, Biixi, ayaa weerar ku qaaday guriga Sargaal lagu magacaabo Liibaan Madaxweyne oo katirsanaa saraakiisha Bad-baado Qaran.
Sidoo kale, Keydmedia Online, ayaa hore u baahisay waraaq ka soo baxday xaafiiska Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya, Cabdi Xasan Maxamed ‘Xijaar’ taas oo lagu xusay magacyada 15 Sargaal, oo ka tirsan qeybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir, lana sheegay in laga joojiyay xuquuqaadkii ay lahaayeen, isla markaana laga furayo gal-dacwadeed, sababo la xariira in ay ka tisanaayeen Badbaado Qaran.
Quburada aadka ugu dhuunduleesha habdhaqanka, kooxda muddo xileedku ka dhamaaday ayaa sheegaya in ay u fududdahay in ay adeegsadaan Al-Shabaab, si loo khaariyo qof ay u arkayaan inuu khatar ku yahy damacooda gurracan.
Heshiis dhex maray Xukuumadda Rooble iyo Badbado Qaran, ayaa la isku raacay in aan la beegsan saraakiisha CBQ, hayeeshee tan iyo markii ay ka baxeen magaalada waxaa socday weerar ka dhan ah.